Ny 11 Oktobra lasa teo no nahare vaovao mikasika ny ratsy hataon’ity lehilahy ity ny mpitandro ny filaminana. Niroso avy hatrany tamin’ny famotorana ireto farany ka fantatra nandritra izany ary fa avy any amin’ny distrikan’i Mahabo ity lehilahy ity, ary efa malaza ratsy amin’ny famatsiana ody gasy ireo dahalo ao Belo. Tamin’ny fisavàna ity lehilahy ity moa dia ody gasy maro toy ny mohara, sy tapakazo maro no tra-tehaka teny aminy. Nogiazana avy hatrany ireo ody gasy marobe ireo ary nentina nanaovana fanadihadiana eo anivon’ny CSPD Belo Tsiribihina ilay lehilahy. Mbola mitohy ny fanadihadiana azy.